Aqoonta Sariirta – Page 3
Faa,iidooyinka Muhiimka Ah Ee Ay Leedahay Kulanka Sariirta Ee Maalin Kasta, Qaar Caafimaad Ayaa Ku Jira
Faa,iidooyinka kulanka sariirta maalin kasta ah ayaa ah kuwo aad u badan iyada oo lamaanaha ka caawisa waliba fiicnaysa dareenkooda niyada waxa ay sidoo kale leedahay faa,iidooyin kale oo dhanka caafimaadka ah. Hadaba waxa uu […]
3 Wado Oo Dabiici Ah Oo Aad Kor Ugu Qaadi Karto Dareenkaaga Kulanka Sariirta
Kulanka sariirta ee lamaanaha is qaba ayaa ah midka ugu muhiimsan noloshooda maadama uu ka qayb yahay Noloshooda joogtada ah. Waxa jirta wadooyin badan oo ka fog in aad qaadato dawooyin si aad kor ugu […]
Kulanka sariirta ayaa ah mid ay Raggu si weyn u sugaan habeenka Guurka waxana jirta waxyaabo badan oo ay ka fishaan Gacalisadooda. Waxa laga yaabaa qaar badan oo ka mid ah Dumarku in ay dareemaan […]
Kadib marka ay dhamaato Xaflada Arooska oo ay Labada Lamaane kali ku noqdaan Guriga markii ugu horaysay waxa laga yaabaa in ay maskaxdooda ku soo dhacdo waxyaabo badan hadii ay noqoto fikrado xun kuwo fiican […]
Maxaa dhici doona habeenkan?, Miyaan qancin doonaa lamaanahayga? sidee Ayuu noqon doonaa qaabka jidhkayg? Waxa aan qabaa weyn oo ku aadan Habeenkan, dhamaan su,aalahaas ayaa ka guuxaya madaxaaga habeenka Aarooskaaga ka hor inta aanad aadin […]
Waxaa jira cunooyin sara u qaada diirnaanta dareenka kacsiga taasi oo jawiga ka dhigeysa mid ku saleysan jawi Romantik ah , iyadoo cunooyinkasi qaarkood ay sara u qaadaan dareenka . Hadaba cunooyinkaas waxaa ka mid […]
Waxaad moodaa in bulshadeena ay ku yartahay wax waydiintu, taasoo u sabab ah aqoon la`aan baahsan iyo dadkeena oo aan inta badan wax wayn u arag waxyaabaha qaar sida dhibaatadan Akhriste waxa hubaal ah in […]